भायानेटको फेस्टिभ अफरः ‘भायानेट बडा दशैंमा बडा टिभी’ | Ratopati
कामाडौं । विगत २० वर्षदेखि व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि इन्टरनेटको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको भायानेटले यस वर्षको आफ्नो चाडपर्वको अफर ‘भायानेट बडा दशैंमा बडा टिभी’ ल्याएको छ ।
कम्पनीका अनुसार नेपालीहरुको महान चाड दशैं र तिहारको उपलक्ष्यमा ‘भायानेट बडा दशैंमा बडा टिभी’ नामक योजनामा ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन सेट र क्यास भाउचर प्रदान गरिनेछ ।
यस योजनाअन्तर्गत, भायानेटका ग्राहकहरुले ४३ इन्चको स्काई वर्थ एलइडी टिभीको साथ ३०एमबीपीएस इन्टरनेटको वार्षिक प्लान र भायाटिभी सेवा मात्र रु. ४१,९९० प्राप्त गर्नेछन् । ३२ इन्चको स्काई वर्थ एलइडी टिभीको साथ ३०एमबीपीएस इन्टरनेटको वार्षिक प्लान र भायाटिभी सेवा मात्र रु. २८,९९० प्राप्त गर्नेछन् ।
यति मात्र होइन, यो चाडपर्वलाई अझै रमाइलो बनाउन भायानेटले ईसेवाको रु. ६५० सम्मको क्यास भाउचर प्रदान गर्दैछ भने पुराना ग्राहकहरुले थप रु. ६०० सम्मको छुट पनि प्राप्त गर्नेछन् ।
भायानेटको दावी छ कि ग्राहकहरुले यस अफरबाट टेलिभिजन सेटमा मार्केट रेटको दाँजोमा ३५% भन्दा बढीको छुट पाउने छन्र भायाटिभीको सेवाका साथ अब युट्युब उपलब्ध हुने भएकोले अफरमा प्रदान गर्ने एलईडी टिभीमा स्मार्टटिभीको फिचरको मजा लिन सकिनेछ ।
यस अफरका साथ भायानेटले यो चाडपर्वको अवसरमा ग्राहकहरुलाई खुशी बाँड्न र रोमाञ्च प्रदान गर्न खोजेको बताएको छ ।